Epoupa Oramba Kutambira Dynamos Achiti Atange Apiwa Mari Dzake Dzese
Vatambi vechikwata che Dynamos FC
Mumusha meDynamos muri kubvira moto kwasara svondo rimwechete kuti makundano eCastle Lager Premier Soccer League atange.
Mutambi wekuCameroon Christian Epoupa, uyo airova mambure pamadiro mwaka wapera, aramwa basa nenyaya yemari yake yechibvumirano chemwaka wapera iyo asati atambidzwa nechikwata chine mukurumbira ichi.
Epoupa aramba kupinda munhandare kuita gadziriro achiti iye haasi kudzoka kusvikira atambidzwa mari yake zviuru gumi nezvishanu zvemadhora iyo akanyorerana pasi neDembare kuti aizopihwa asati atanga kutambira chikwata ichi gore rapera.
Epoupa ndiye anga achitarisirwa nevatsigiri vechikwata ichi kuti achavarovera mambure apo Dynamos iri kurwira kutora mukombe weligi uyo yakapedzisira kutora muna 2014 zvichitevera kusiya basa kwakaita vamwe vatambi vane mukurumbira.
Kuramwa basa kwaEpoupa kwauya panguva iyo Dynamos yatizwa nevatambi vakawanda vane mukurumbira kusanganisira Masimba Mambare na Ashley Reina, avo vakaenda kuBlack Rhinos, pamwe naTichaona Chipunza uyo akaenda kuNgezi Platinum Stars.
Pamusoro pezvo, kaputeni wechikwata ichi Ocean Mushure haasati apinda mukamba achichemera zvekare mari yake yechibvumirano chegore rapera uyezve achitarisira imwe mari yekutambira chikwata ichi gore rino.
Munyori mukuru weDynamos VaWebster Marechera vanoti vari kugadzirisa nyaya yaEpoupa nedzevamwe vatambi vavo vachiti ivo vane chivimbo kuti Epoupa achange ari mugadziriro svondo rinouya mitambo isati yatanga.
Asi mumwe muteveri weDynamos VaTichafa Mwendamberi vanoti kunetsana kweDembare nevatambi panguva ino yezororo nenyaya dzemari hazvisi zvitsva vachiti ivo vari kutarisira kuti chavo chichakwikwidza zvine mutsindo kutora mukombe weligi.
Dynamos haisati yanyoresa nevePremier Soccer League vatambi vainenge ichishandisa mwaka uno.
Zvimwe zvikwata zvinoteverwa nechaunga zveCaps United neHighlanders, zvakatopedza nenyaya iyi kare.
Dynamos iri kusangana neChicken Inn mumutambo wayo wekutanga.
Zvichakadaro, chikwata chenyika che kiriketi chemaChevrons chadongorera muSuper Six stage yemakundano eWorld Cup ayo ari kuitirwa munyika muno.
Chikwata ichi chiri kungoda kubanda Hong Kong mangwana muQueens Sports Club kuti chipinde muSuper Six stage umo muchabuda zvikwata zviviri zvichaenda kumakundano eWorld Cup kuEngland nekuWales gore rinouya..
Pari zvino, Zimbabwe iri pachinzvimbo chechipiri pasi peScotland iyo yakarova Afghanistan, Scotland pamwe neWales.
Asi Zimbabwe ichange isina Brian Vitori uyo ambomiswa kutamba neveInternational Cricket Council achinzi anga achibirira mukukanda kwake bhora mushure meongororo yakaitwa apo Zimbabwe yakarova Afghanistan nemaranzi maviri.
Asi izvi hazvisi kubvisa mwongo muchikwata chemaChevrons icho chiri kubaka moto chichitungamirwa na Sikandar Raza uyo ari kukanda maranzi pamwe nekutora mawiketsi pamadiro.
Muongorori wemutambo wekiriketi VaSavious Shumba vanoti havasi kuona Hong Kong ichimira pamutambo uyu vachiwedzera ivo kuti Zimbabwe yatove muSuper Six.
Zimbabwe iri kutarisira kuve chimwe chezvikwata zviviri zvichabudirira kuenda kuWorld Cup uko kuchange kune zvikwata gumi zvinorura pasi rose mumutambo uyu.